iPhone SE uye iPhone 8 kukatanurwa zvakafanana | IPhone nhau
iPhone SE uye iPhone 8 kukatanurwa zvakafanana
Nguva dzose zvinoitika. Pangosvika chishandiso chitsva cheApple pamusika, panogara paine vanhu vanoda utore uzviputse mukati. Uye ino nguva yanga isiri iyo iFixit matekinoroji, avo vanowanzo kuve vekutanga kugaya zvigadzirwa zvitsva zvakagadzirwa muCupertino.
Ino nguva yanga iri mushandisi akabvisa iyo nyowani iPhone SE yakapihwa svondo rapfuura uye yakazvienzanisa neyakatangira, iyo iPhone 8. Uye pakutanga kuona zvinoita sekuti Apple haina kuuraya zvakanyanya kugadzirisazve iyo nyowani iPhone, chaizvo.
Kuona mufananidzo weiyo nyowani iPhone SE yakatanhamara padhuze ne iPhone 8 nenzira imwecheteyo, zvinoita kunge imwe yeaya mahobi kuwana misiyano mitanhatu. A priori Apple haina kunetsa zvakanyanya kugadzirisazve chishandiso chitsva. Izvo zvave kungovandudza zvimwe zvemukati zvikamu uye kufudza.
Mushandisi Rico Cerva atumira vhidhiyo pa Instagram tichienzanisa mhando mbiri dzakaparadzaniswa. Vhidhiyo yacho inopa kutarisa kwakadzama pane iyo iPhone SE teardown maitiro. Mukati, mudziyo unoratidzika kunge wakaenzana neiyo iPhone 8, nemisiyano mikuru kubva kune processor. A13 uye modem yakasiyana.
Vhidhiyo yacho inotofamba nenzira yekuchinjana zvinhu pakati peiyo iPhone 8 neiyo iPhone SE, ine nhanho dzakasiyana dzebudiriro zvichienderana nemojuru inofanirwa kuchinjwa. Semuyenzaniso, Kuchinja LCD pakati pemidziyo miviri kunoshanda, asi kamera yekuchinjana haina.
Yekutanga mese iPhone SE inotarisirwa kusvika kune vatengi kutanga nhasi, Kubvumbi 24. Isu tinoshuvira kuona akawanda teardown mavhidhiyo munguva pfupi, kunyanya kubva kushamwari pa iFixit, yakasarudzika yakazara. Parizvino, isu tinogutsikana nevhidhiyo iyi kuti titarise zvakanyanya mukati meiyo iPhone SE ichienzaniswa neiyo iPhone 8.
Pakutanga kwekutanga ivo vakafanana, sezvo zvizhinji zvezvinhu zvacho zvisina kuchinja. Iko kuvandudzwa, processor yakavandudzwa uye imwe yekutaurirana modem, zvakangoitwa nekuchinjisa chimwe chinhu cheimwe. Izvo zvakasara zvechigadzirwa zvakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone SE » iPhone SE uye iPhone 8 kukatanurwa zvakafanana
Teregiramu kuvhura yakachengeteka vhidhiyo mafoni kusati kwapera gore
Apple inotangisa nzvimbo nyowani kusimudzira iyo nyowani iPhone SE pamasocial network